Date My Pet » 5 Zvikanganiso Varume Ita Kuti zvingakanganisa ukama
Last updated: Nov. 30 2020 | 3 Maminitsi verenga
Varume vakawanda munyika ino mhando, zvinoshamisa vanhu vane hombe mwoyo saka nyaya ino hakuna dissing navo. Zviri pamusoro 5% vasingabvumi kuwira kuti chikamu. Kunyange zvazvo vari 5% Zvichida pane vanhu vakawanda vakanaka, chete kwete kunaka mukomana zvinhu kana kuti zvichida havana kuwana munhu asi uyo vangadai achawira pamusoro nenhendashure kuita zvose. Munyaya ino Ndava kunyora anenge mashanu idzo ichi 5% zvingakanganisa ukama.
Chakanakira kana munhu Cheats ndechokuti ivo kupfuura kunge vasiri kuti anoda munhu vari. Kana mukomana ari murudo nemunhu zvaasingakwanisi haangavi kubiridzira pamusoro pavo nokuti vose hapana zviripo. Izvi hazvisi kureva haana kutarisa uye haagoni kuona kuti munhu akanaka. Ndinofunga tingadai tose nhema kana takati pataiva muukama hatina asi musiyano uri kana muri murudo murege kuita pairi. Saka kana mukomana Cheats zvinoratidza kuti haasi kuti kuda mumwe wake uye anosika kutadza kuvimba kuti yakawanda vakaroorana vasingakwanisi kudzoka kubva.
Mabasa Like A Jerk
Aratidza kasharara haasi inotonhorera Kutarira. Asi pane vakomana avo zvinosiririsa kufunga zviri. Vamwe kunyange kufunga kuti inotonhora uye “sei munhu anofanira kuita” uye zvose marara. Haafaniri kuva inoyerera maruva ose maminitsi mashanu asi haina kutora yakawanda chete kuti zvakanaka. Neimwe nzira Ndinonzwisisa nei yakawanda vakomana dzimwe nguva vanoita zvakadai kana vasiri munhu jerk rakadzika pasi. Vanhu vazhinji vanoita semukomana zvakaipa yose nounhu asi ndinofunga umo kukurukurirana chinozadzwa avhiringidzwa pane kuti vanoda mukomana chakaipa chakanaka mwoyo ndiani kuvabata zvakanaka uye pane hombe musiyano pakati mukomana zvakaipa nomwoyo unofara uye mumwe munhu akakuitira zvakaipa uye anoisa pasi dzose nguva iwe. Ndinofunga mutsa zvinogona dzimwe nguva kuonekwa sokusava nesimba kana chaizvoizvo zviri ane simba uye vazhinji yakanakisisa kufambidzana apo vose vanhu kugarisana zvakanaka.
Hits Partner kwavo
Sezvo ino iri pamusoro vakomana Ndiri kunyora chikamu ichi pamusoro mukomana kurova nomumwe wavo asi chikamu chino, kufanana chikamu ose mairi, rinogona kushandisirwa kuzvinhu mukadzi anoita kuti ukama zvakare saka ndiri pasina nzira achiti chete vakomana rova ​​vavo. Ndiri kusanganisira izvi nokuti ndizvo ugliest chinhu munhu anogona kuita uye kunganyatsoratidza kumisa noukama kubva mberi uye inonyatsokwanisa vanofanira kuamisa. Usabvumira munhu pasinei zvikuru munovada kutaura newe kumativi kana ivo mumuviri kukurwadzisa.
Isa wose Else pamberi pako
Kana uri ukama yakareba, uri chikwata. Havana kuva vachiisa mhuri dzavo, shamwari, vose pamberi pako uye kutora zano ravo nguva dzose pamusoro yenyu. Norutivi rwako iwe pamwe havafaniri uzviise ezvinhu umo vachifanira kusarudza asi kana ikauya zvakada mai vavo haadi iwe uye anoda aputse nemi, kana vanokuda vanofanira kuisa iwe ukama kutanga.
Kugadzirisa For Best Second
Ndinofunga tose kuziva kana tiri pekukurudzirwa mubayiro. Vangazvikunda kunge kuda mumwe munhu uye ikawa kuburikidza kana havana kunzwa saizvozvo pamusoro pavo saka vakagara kwamuri uye izvozvo kumbobvira chikonzero chakanaka kuti ukama. Ndinofunga tose kutsvaka fairytale, chero kuti fairytale zvinoreva kwatiri, uye vanhu vazhinji vanoguma vakanogara mumwe munhu kuti arege kuva oga izvo pacharo akaita zvinonzwisisika asi hazvina kunaka kana rimwe divi mumwe munhu sokuti upenyu hwavo nemunhu ari fairytale kwavo apo rumwe munhu anoona sezvinoputswa zvakanakisisa zvavaigona kuita munhu wavanoda vakafamba kure uye mumamiriro ezvinhu akaita kuti nokufamba kwenguva dzose rinoguma vasingachafari.